रचनात्मकता Comments टिप्पणीहरू अक्टूबर -२-20-२०२०
वाह, मान्छे! नयाँ साना ढुवानी समय !! हा, हाम्रो मार्केटिंग केटी कती खुसी छ हेर्नुहोस्!
ठीक छ, यो तस्वीर पोस्ट गर्नु अघि, दुविधा मेरो मुटुमा संघर्ष गर्यो। एक मित्र जोसँग "लिंक्डइन" जडानको एक ठूलो रकमको मालिक मलाई मायालु सल्लाह दिनुहुन्छ: हे, ह्यारी! केटीलाई मोल्डको साथ खडा हुन आमन्त्रित गर्नु राम्रो हुँदैन, विशेष गरी ठूलो मुस्कुराएको अनुहारको साथ! आउनुहोस्, मोल्ड निर्माण धेरै गम्भीर केस हुनुपर्दछ, हुन्छ? म टेक्निकल केटा हुन सक्छ जो एक क्यालिपर वा ड्राइंग कागज बदल्न को लागी अधिक उपयुक्त हुनेछ?
त्यस क्षणको लागि, जसरी उनले औंल्याए, म दु: खी महसुस गर्छु कि हाम्रो टोलीलाई गाह्रो अवस्थामा पार्छु, जस्तो कि मैले के गरेकी छु प्रिय पाठकहरु लाई एक नराम्रो छाप। यस्तो देखिन्छ कि दर्शकको आँखा पकड गर्नु नै मेरो पोष्टिंगको लागि एक मात्र उद्देश्य हो! तसर्थ, यस पटक मैले सोचे जस्तै उसले गर्ने योजना बनाएको थियो, "वास्तविक" मोल्ड निर्माताको रूपमा औपचारिक हुन! त्यसोभए, मैले गम्भीरताका साथ मेरा सहकर्मीहरूको सहयोगमा पहिलो चित्र लिएँ। जस्तै तल देखाइएको तस्वीर, केवल मोल्ड र मेरो लेन्सको अगाडि देखाइएका उत्पादनहरू, औपचारिक र सफा, सबै ठीक छन्। तर मलाई केहि हराएको जस्तो लाग्छ ...
जब मैले तस्बिरहरू लिन समाप्त गरें, र पछाडि हिड्ने योजना बनाएँ। हाम्रो "s ० को दशक पछि" केटीले भनिन्: के मसँग यो मोल्डको साथ फोटो छ? मैले भने, अवश्य! त्यसो भए उनी सबै प्रकारका "प्रोफेशनल" पोल्ड बनाउन सुरु गर्दछ, जस्तै व्यक्तिगत सेल्फी बनाउन, र कार्यशालामा अन्य कामदारहरू सबै हाँस्दै पछाडि क्यामेरामा बन्द भए, अचानक वर्कशप वातावरण न्यानो र सामंजस्यपूर्ण हुँदै गयो। हाम्रो टोलीका सदस्यहरू उनीहरूको प्रदर्शनसँग खुसी छन्, र उपलब्धीको भाव उनीहरूको हँसिलो अनुहारमा देखा पर्दै…
ठीक छ, उपकरण बनाउने काम एक गम्भीर र सटीक केस हुनुपर्छ, तर खुशी मुडसँग काम गर्नु हाम्रो श्रमिकहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, जब प्रोजेक्ट समय कडा हुन्छ, हाम्रो कामदारहरू अक्सर ओभरटाइम काम गर्दछन्, रातभरि पनि लिड-टाइम राख्न, हाम्रा ग्राहकहरूलाई वचन दिनुहुन्छ। प्रक्रियाको क्रममा तिनीहरू थकित र चिन्तित छन्, यदि सम्भव भएमा उनीहरूको काम र उत्पादनप्रति हाम्रो आदर र मूल्यांकन देखाउन, किन होइन? जब उनीहरू आफ्नो "मास्टरवर्क" संग चम्किरहेछन्, के हामीले तिनीहरूलाई हाम्रो ताली सुन्न दिनुहुन्न र? टूलि cold चिसो छ, तर टोलीबाट तातो छ!
अब एक दिन, धेरै टुलि company कम्पनी मालिक गुनासो गर्दछन्: कामदारहरू भर्ना गर्न अधिक र अधिक गाह्रो हुन्छ, कुनै पर्वाहक छैन डिजाइनर, इन्जिनियर वा मेशिन अपरेसनहरू। विशेष गरी "after ० दशक पछि" समूहको लागि, उनीहरूको दिमागमा जस्तो, मोल्ड बनाउने उद्योगमा धेरै रमाइलो हुँदैन। नयाँ पुस्तासँग काम गर्ने बारे तिनीहरूको परिभाषा छ, टीम निर्माण र सुदृढीकरण गर्न खुशी बढी र अधिक महत्त्वपूर्ण कारक बन्छ।
प्यारा पाठक, के तपाईलाई लाग्छ कि हाम्रो दैनिक काममा केही खुशीको दृश्य राख्नु भएको छ, जब टोलीलाई आराम दिईरहेको छैन जब प्रक्रिया तनावग्रस्त छैन वा छैन? कृपया तल दुईबाट चित्र छनौट गरेर तपाईंको दृष्टिकोण देखाउनुहोस्।